Teny 16 momba ny famelana ny lasa sy ny fiandrasana ny ho avy - Quotes
Fanononana 16 hanampiana anao hamela ny lasa
Matetika ianao no mahita ny lasa taloha mitarika anao, mitazona anao ary manakana anao tsy handroso amin'ny lalan'ny fiainanao? Raha izany dia ity famelana ny lasa dia tokony hanampy.
Vakio izy ireo, vakio indray izy ireo ary zahao ny lesona ampianariny. Soraty amin'ny taratasim-paositra izy ireo ary apetaho manodidina ny tranonao izy ireo ary mamorona boky kely misy teny nalaina ary vakio ny sasany rehefa mifoha ary alohan'ny hatory dia manaova zavatra izay mampatsiahy anao isan'andro ny maha-zava-dehibe ny famelana.
Tsy azonao atao ny mandray io fifandraisana vaovao io, io namana vaovao io, io kariera vaovao io, ilay fisakaizana vaovao, na ilay fiainam-baovao tadiavinao, raha mbola mitazona ny entan'ny farany ianao. Alefaso… ary avelao ianao hamihina izay miandry anao eo an-tongotrao. - Steve Maraboli
Tsotra, aza mitondra ny entan'ny lasa, sokafy ny tananao dia avelao handeha izy. - Debasish Mridha
Sarotra ny manazava ny momba anao rehefa mitondra amboara maro be ianao taloha. Nianatra namela aho ary nifindra haingana kokoa tamin'ny toerana manaraka. - Angelina Jolie
ny fomba hialana amin'ny fitiavana
Ny famelana azy dia ny fahavononanao hanova ny zavatra inoananao mba hitondra fiadanam-po sy fifaliana bebe kokoa amin'ny fiainanao fa tsy hihazona ireo finoana izay mitondra fanaintainana sy fijaliana. - Hal Tipper
Raha te hanadino zavatra na olona ianao dia aza mankahala azy mihitsy, na aza mankahala azy mihitsy. Ny zava-drehetra sy izay rehetra halanao dia voasokitra ao am-ponao raha te hamela zavatra ianao, raha te hanadino ianao dia tsy afaka mankahala. - C. JoyBell C.
Rehefa avelako ny tena toetrako dia lasa lasa olona aho. - Lao Tzu
maninona no ilaina ny manaiky ny hafa
Ny olona sasany mino fa mihazona sy mihantona ao dia mariky ny tanjaka lehibe. Na izany aza, misy fotoana ilana hery bebe kokoa hahafantarana hoe avelao handeha ary avy eo dia ataovy. - Ann Landers
Alohan'ny hahafahanao miaina dia mila maty ny ampahany aminao. Tokony hamela ny mety ho efa teo ianao, ny fihetsika tokony nataonao ary izay tianao ho nolazainao tamin'ny fomba hafa. Tokony hanaiky ianao fa tsy afaka manova ny zavatra niainana taloha, ny hevitry ny hafa amin'izao fotoana ara-potoana izao, na ny valiny avy amin'ny safidiny na ny anao. Rehefa tsapanao izany fahamarinana izany amin'ny farany, dia ho azonao ny tena dikan'ny famelana ny tenanao sy ny hafa. Hatramin'izao dia ho afaka ianao amin'ny farany. - Shannon L. Alder
Ravanay ny tetezana ao aoriko… avy eo tsy misy safidy afa-tsy ny mandroso. - Fridtjof Nansen
Avelao handeha ny raharaha. Afaho izy ireo. Mihataha aminy. Tsy misy milalao an'ity fiainana ity amin'ny karatra voamarika, ka mandresy isika indraindray ary resy isika indraindray. Aza manantena na inona na inona valiny, aza manantena ny hankasitrahana ny ezaka ataonao, ho hita ny fahalalanao, ho takatra ny fitiavanao. Atsaharo ny fandefasana televiziona mampihetsi-po anao mba hijerena hatrany io programa io ihany, izay mampiseho ny fijalianao tamin'ny famoizana iray: manapoizina anao fotsiny izany, tsy misy zavatra hafa. - Paulo Coelho
Teny nindramina 15 tadidio rehefa mahatsapa fa very eo amin'ny fiainana ianao
Zavatra 10 tokony hiala amin'ny mahamenatra anao
Teny notsongaina Paulo Coelho tena ilaina 50 izay hanova ny fiainanao
Tsy mitazona anao ny fijaliana. Mijaly ianao. Rehefa lasa mahay amin'ny kanto mamela ny fijaliana ianao, dia ho tsapanao fa tsy nilaina ny nitarihanao ireo enta-mavesatra ireo niaraka taminao. Ho hitanao fa tsy misy olon-kafa hafa noho ianao tompon'andraikitra. Ny marina dia ny fisiana dia maniry ny hahatonga ny fiainanao ho fety. - Osho
latifah mpanjakavavy net 2021
Ny mitazona dia ny mino fa misy ny famelana taloha fotsiny dia ny fahalalana fa misy ny ho avy. - Daphne Rose Kingma
Tonga saina aho tamin'ny farany fa rehefa mitahiry ny hatezerana, ny lolompo sy lolompo amin'ireo izay nandratra ahy, dia nomeko azy ireo ny fifehezana. Ny famelana heloka dia tsy ny fanekena ny tenin'izy ireo sy ny asany. Ny famelana heloka dia ny famelana ny fiainako. Tamin'izany no nanafahako ny tenako. - Isabel Lopez
Tsy ny ataon'ny hafa no manahirana antsika (satria ny fihetsika nofehezin'ny governemantany), fa ny antsika manokana kosa. Esory izany didim-pitsarana izany ary manapaha hevitra mba hamela ny fahatezeranao, ary efa tsy hisy intsony. Ahoana ny famelana anao? Amin'ny fahafantarana fa tsy mahamenatra anao ny fihetsika toy izany. - Marcus Aurelius
Tsotra tokoa angamba ny famelana azy, saingy tsy dia zavatra iray ihany io. Avelao fotsiny handeha, mandra-pahatongan'ny andro iray dia lasa soa. - Eleanor Brownn
Ny famelana dia manampy antsika hiaina anaty toe-tsaina milamina kokoa ary manampy amin'ny famerenana ny fandanjana. Io dia mamela ny hafa ho tompon'andraikitra amin'ny tenany sy amintsika hanala ny tanantsika amin'ireo toe-javatra tsy antsika. Manafaka antsika amin'ny adin-tsaina tsy ilaina izany. - Melody Beattie
Ho an'ireo teny nindramina ireo - sy ny hafa toa azy ireo - ho fitaovana mahomby amin'ny famoronana fanovana ao anatinao, andramo ny mampatsiahy azy ireo azy matetika araka izay tratra. Raha tsy manao zavatra hafa ianao dia tsorito ity pejy ity mba hahafahanao miverina aminy matetika.
ny fahatsapana fa tsy tadiavina
maninona aho no tsy mety manao zavatra mety
ahoana no ilazana amin'ny olona tianao fa tsy mampatahotra azy ireo ianao
inona ny sandan'ny mpitsara judy
fahaverezan'ny fifandraisana akaiky amin'ny fifandraisana